About Us - Japan Electronics College
Japan electronic collage
1-25-4 hyakuninn chou Shinnjuku ku Tokyo.
ဖုန်း 0120-00-9691　FAX 03-3363-7107
အဆင့်မြင့်ပညာရေး၊လုပ်ငန်းခွင်သုံးပညာရေးနှင့်carrierပညာရေးကိုအခြေပြု၍ ကမ္ဘာလာကအတွက် အကျိုးပြု ပညာရှင်များကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။
နည်းပညာကိုအဓိကထားပြီး ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားမြင့်မားသော နည်းပညာရှင်များကိုမွေးထုတ်ပေးလျှက်ရှိသည်။၁၉၅၁တွင်စတင်တည်ထောင်ပြီး ယနေ့ထိကျောင်းသားပေါင်း ၁သိန်း၁သောင်းမွေးထုတ်ခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တည်ထောင်ပြီးချိန်မှစ၍ အီလထရောနစ်ပိုင်းကျွမ်းကျင်သူများကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်ထားပြီး၊လုပ်ငန်းခွင်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောအရည်ချင်းပြည့်မှီ အင်ဂျင်နီယာ၊creator ပေါ်ထွန်းစေရန်အတွက် နေ့ပိုင်းဌာနပေါင်း ၂၀၊ညပိုင်းဌာနပေါင်း ၄ ဌာနကိုပြင်ဆင်ထားရှိထားပါတယ်။
ဤကျောင်းတွင်ကျွမ်းကျင်သူများမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်(လုပ်ငန်းခွင်သုံးပညာရေးနှင့်carrierပညာရေး) ပင်မ မဏ္ဏိုင် နှစ်ရပ်ကို ဦးတည်ထားပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်သုံးပညာရေးဆိုသည်မှာ နှစ်လရှည်ကြာစွာသင်ကြားပေးခဲ့သော သင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံ ၊တုပမှုမရှိသော ပညာအရင်းအမြစ်၊proတစ်ယောက်ဖြစ်စေရန်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းများ၊တီထွင်ထားသောသင်ရိုးညွှန်းတန်း တို့ကိုအခြေပြုကာ ထူးချွှန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းကိုဆိုလိုသည်။carrierပညာရေးဆိုသည်မှာ ကျောင်းသားဘဝမှတဆင့် group work၊project၊active learning စသည့်အခွင့်အလမ်းများကို ပြည့်စုံလုံလောက်စွာထားရှိပြီး လူမှုဆက်ဆံရေး ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မှုစွမ်းအားစသည့် လုပ်ငန်းရှင်အသိအမှတ်ပြုကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်စေရန် လေ့ကျင့်ပေးခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
ကျောင်းဝင်သူများမှာ အထက်တန်းကျောင်းပြီးသူများ မှာများပြားပြီးနှစ်တိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းများကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအတွေ့အကြုံရှိသူများလည်းပါဝင်ကာ ဘာသာရပ်အသီးသီးတွင်လေ့လာသင်ကြားပြီး ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလျှက်ရှိသည်။၂၀၁၄ မှစတင်ပြောင်းလဲသွားသောသိပ္ပံပညာဝန်ကြီးဌာန အသိအမှတ်ပြု လုပ်ငန်းခွင်သုံးလက်တွေ့လေ့လာသင်ကြားမှုကို ပြင်ဆင်ထားရှိထားတာမို့ ယုံကြည်စွာဖြင့် မိမိတို့အိမ်မက်များကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ကြပါကြောင်း။
Awarded top prize in the vocational school division of the Nihon Ryugaku Awards 2015.*We have won four years straight since 2012.
ဂျပန်စာသင်ကျောင်းဆရာ/ဆရာမများမှ ပညာတော်သင်ကျောင်းသား/သူများကို တိုက်တွန်းသော ကျောင်းအဖြစ်(Nihon ryugaku Awards2015)ဆုကိုအပ်နှင်းသော အခမ်းအနားကို အိုလံပစ်အထိမ်းအမှတ်လူငယ်ဆုံစည်းရာစင်တာ တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ယခုနှစ်တွင် လေးနှစ်မြောက်ဖြစ်ပြီး ဂျပန်တပြည်လုံးတွင်ရှိသော ဂျပန်စာသင်ကျောင်းပေါင်း ၁၆၆ ကျောင်းမှပေးမဲပေါင်း ၄၇၁မဲရရှိကာ ကောလိပ် တက္ကသိုလ် မာစတာတက္ကသိုလ်များမှ အဆင့်မြင့်ကျောင်းအဖြစ်အသိမှတ်ပြုခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဂျပန်အီလထရောနစ် ကောလိပ်သည် ကောလိပ်ဆုကို(အရှေ့ဂျပန်ဒေသ)လေးနှစ်ဆက်တိုက်ရရှိကာထိပ်ဆုံးကျောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ပညာတော်သင်ကျောင်းသားများအတွက်ကျောင်းလခလျော့ပေးခြင်း၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နှီးနောဖလှယ်ရေး ပညာတော်သင်ဆု၊ရှင်းဂျုခု ခုမှပညာတော်သင်ကျောင်းသားများအတွက်ပညာတော်သင်ဆုများ
Konami, konami digital entertainment, Gainax, O.L.M, omnibus.japan, digital frontier, zack entertainment, bitol entertainment, sim, anima, CGCGstudio, trans arts .......
KVH, Seattle consulting, nihonthird.party, JESCO holding, NTTcom, solution and engineer link, NTT data CCS, NTT-ME, ISF net, eitarosoft, ACHIEVO Shanghai, CLINKS, jorudan......